Slackel, distro miorina amin'ny Slackware sy Salix misy openbox | Avy amin'ny Linux
Slackel, distro miorina amin'ny Slackware sy Salix misy openbox
Andro vitsy lasa izay Dimitris Tzemos mpamorona ny fizarana Slackel dia nanambara ny famoahana ny kinova Slackel 7.1 vaovao izay miaraka amin'ny fanatsarana vaovao, fanavaozana ny fonosana ary koa ho an'ny 64 bit, lohahevitra kisary vaovao ary koa fanohanana ny fikirakirana rakitra maharitra.
Ho an'ireo izay tsy mahalala an'i Slackel dia azoko lazaina aminao izany ity dia fizarana Linux miorina amin'ny Slackware sy Salix. Izy io dia mifanentana tanteraka amin'ny Slackware sy Salix, fa ny mahasamihafa azy dia ny fampidirana ny kinova Slackware ankehitriny.
toy izany Ireo mpampiasa Slackware dia afaka mahazo tombony amin'ny repositories Slackel. Ity fizarana Linux ity dia azo alaina amina fanontana telo samihafa, KDE, Openbox, ary Fluxbox. Ny sary kapila slackel dia atolotra amin'ny endrika roa samy hafa, ny sary kapila fametrahana ary ny sary kapila mivantana.
Ny mampiavaka an'i Slackel dia ny fampiasana ny sampana Slackware-Current izay havaozina tsy tapaka ary ny tontolon'ny sary dia miankina amin'ny mpitantana ny varavarankely Openbox.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana an'ity mpitantana varavarankely ity, ny distro dia manana fitaovana openbox (obconfi, obkey, obmenu) izay manampy antsika handrindra ny menio na ny bika aman'endriny ary koa ny programa sasany mba hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa.
Amin'ny lafiny iray, Teboka tsara iray hafa manasongadina ny fizarana dia i Slackel dia manana installer "sli" sary, izay manamora ny fametrahana azy.
1 Slackel 7.1 Fomba vaovao manasongadina
1.3 Fepetra takiana farafahakeliny hametrahana Slackel 7.1
2 Sintomy ary mahazoa Slackel 7.1
Slackel 7.1 Fomba vaovao manasongadina
Amin'ity famoahana vaovao an'ny Slackel 7.1 ity ny zava-baovao lehibe misongadina dia ity misy ity kinova ity tsy misy afa-tsy amin'ny kinova 64-bit.
Slackel 7.1 dia manampy fanohanana encryption rakitra maharitra maharitraAmin'ny fanatanterahana script dia hanontaniana ny mpampiasa raha te-hanafina ilay rakitra maharitra izy, izay ahafahan'ny mpampiasa manomboka amin'ny safidy maharitra ao anaty menus.
Ho fantatry ny rafitra fa ny rakitra tsy miovaova dia voahidy ary hangataka anao hiditra ny teny miafina voahidy hamaha azy.
Azonao atao ny mampiasa an'io fiasa io amin'ny alàlan'ny fanovana ny fanovana = mari-pahaizana maharitra amin'ny trano = fikirizana.
Amin'ny fampiharana maody mivantana, azo natao ny nitahiry ny valin'ny asa teo anelanelan'ny fotoana nampiasana encryption.
Amin'ny lafiny iray, nanampy fanohanana amin'ny boot amin'ny rafitra UEFI sy sary iso hybrid izay azo ampiasaina amin'ny fametrahana sy ny fandefasana maody mivantana.
Fiovana lehibe iray hafa amin'ity famotsorana vaovao ity ny fampidirana ny Linux Kernel 4.19.12, izay ahazoan'ny fizarana fanatsarana ny fiarovana ity kinovan'ny Kernel ity.
Araka ny voalaza teo am-piandohana ny famolavolana ny Ity famoahana vaovao ity dia nahazo fonosana kisary vaovao izay mifototra amin'ny fampiasana ny adwaita-icon-theme sy ny mate-icon-theme-faenza.
Mikasika ireo fonosana rafitra, maro amin'ireo fonosana sy fampiharana no nahazo fanavaozana. Ireo fonosana izay novaina dia:
Midori browser 0.5.11, Firefox 63.0.1, Pidgin 2.13.0, Transmission-2.92, Wicd 1.7.4, Sylpheed-3.7.0 Thunderbird 60.4.0, SMPlayer 18.10, MPlayer 20180720, Exaile 3.4.5, smtube-18.1.0 .2.7, Asunder 3.12.2, Bracero 2.10.8 GIMP 3.40, Mtpaint 3.0.2, Abiword 1.12.34, Gnumeric 6.1.3, Libreoffice 0.8.18.1, Leafpad 6.1, Fbpanel 1.2.5 ary PCManFm 1.33.0, Geany 8 , Openjre-161u12_b2.02, Grub-0.0.8 ary Grub-Scripts-XNUMX.
Fepetra takiana farafahakeliny hametrahana Slackel 7.1
Raha te hampandeha ity fizarana Linux ity amin'ny solo-sainanao dia tokony ho fantatrao fa tsy maintsy manana farafaharatsiny ianao:
512 MB amin'ny RAM
Sehatra kapila mafy 8 GB
Sintomy ary mahazoa Slackel 7.1
Ary farany, ho an'ireo rehetra izay te-hahazo an'ity sary vaovao an'ny rafitra ity ary hametraka ity fizarana Linux ity amin'ny solosain'izy ireo na te hitsapa ny rafitra eo ambanin'ny masinina virtoaly iray.
Mila mankany amin'ny tranonkala ofisialin'ny fizarana fotsiny ianao ary amin'ny fizarana fampidinana azy dia azonao atao ny mahazo ny sarin'ilay rafitra.
Ny haben'ny sary boot afaka miasa amin'ny maody mivantana dia 1.5 GB (x86_64).
Ary farany, raha te hahalala bebe kokoa momba ity fizarana ity ianao dia afaka mitsidika ny tranokala ofisialiny izay ahafahanao mahita sary hafa amin'ilay rafitra, sy ireo antontan-taratasiny.
Ary koa torolàlana ho an'ny mpampiasa hametraka ity distro ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Slackel, distro miorina amin'ny Slackware sy Salix misy openbox
Shinobi, mpizara fanaraha-maso horonantsary open source
Pi-hole, ataovy blocker doka ny Raspberry Pi anao